UTORRENT TSY MANOMBOKA - UTORRENT - 2019
Famahana olana amin'ny fanombohana ny uTorrent
Rehefa miasa miaraka amin'ny client torrent uTorrent, matetika dia misy toe-javatra iray rehefa tsy te-hanomboka amin'ny fehintsoratra ny programa na mivantana amin'ny alalan'ny dika roa amin'ny uTorrent.exe.
Andeha hodinihintsika ny antony lehibe mahatonga ny uTorrent tsy miasa.
Ny antony voalohany sy mahazatra indrindra dia aorian'ny fikatonan'ny fangatahana. uTorrent.exe dia manohy manantona amin'ny mpitantana ny tetikasa, ary ny kopia faharoa (araka ny hevitr'i uTorrent) dia tsy manomboka fotsiny.
Amin'ity tranga ity dia mila manatanteraka izany dingana izany ianao amin'ny alàlan'ny tale mpitantana,
na mampiasa ny laharana baiko mipetraka amin'ny administrateur.
ekipa: TASKKILL / F / IM "uTorrent.exe" (afaka mamaky sy mametaka).
Ny fomba faharoa dia aleo kokoa, satria mamela anao tsy hikaroka amin'ny tananao eo anivon'ireo karazan'asa tena ilaina.
Tsara ny manamarika fa tsy voatery foana ny "hamono" ilay dingana henjana raha tsy mamaly i uTorrent. Amin'ity tranga ity, dia azo atao ny mivezivezy indray. Fa, raha toa ny mpanjifa dia natsangana mba hanangonana miaraka amin'ny rafitra miasa, dia mety hiverina ny toe-javatra.
Ny vahaolana dia ny manala ny programa amin'ny fanombohana amin'ny fampiasana ny fitaovana ampiasaina. msconfig.
Antsoina toy izao izy io: tsindrio WIN + R ary eo amin'ny varavarankely izay misokatra eo amin'ny faran'ny ilany havia amin'ny efijery, midira msconfig.
Mandehana any amin'ny tablette "Startup", tsidiho uTorrent and push "Ampiharo".
Dia averinay indray ilay fiara.
Ary amin'ny hoavy, fenoy ny fampiharana amin'ny alalan'ny sakafo "Fichier - Fialana".
Alohan'ny hanatanterahana ireto dingana manaraka ireto dia tadidio fa ilay dingana uTorrent.exe tsy mandeha
Ny antony manaraka dia ny fikirakirana ny "malemy". Amin'ny tsy fahampian-tsain-dry zareo, ny mpampiasa dia manova ny fepetra rehetra, izay, ho setrin'izany, dia mety hitarika amin'ny tsy fahombiazan'ny fangatahana.
Amin'ity tranga ity dia tokony hanampy ny famerenana ny votoatin'ny programa amin'ny default. Izany dia tratran'ny famafana rakitra. settings.dat ary settings.dat.old avy amin'ny ordinatera miaraka amin'ny client install (lalana amin'ny screenshot).
Fampitandremana! Alohan'ny hamafana ireo antontan-taratasy dia ataovy tahadika tahiry (kopia any amin'ny toerana mety)! Ilaina izany mba hahafahana mamerina azy ireo any amin'ny toerany raha misy fanapahan-kevitra tsy mety.
Ny safidy faharoa dia ny hamafa fotsiny ny rakitra. settings.datary settings.dat.old rename to settings.dat (aza adino ny famerim-bola).
Ny olana hafa ho an'ireo mpampiasa tsy manana traikefa dia ny tondra-drano goavam-be ao amin'ny lisitry ny mpanjifa, izay mety hahatonga ny uTorrent hafahafa amin'ny fanombohana.
Amin'ity toe-javatra ity dia hanampy amin'ny fanesorana ireo rakitra. resume.dat ary resume.dat.old. Mitahiry fanazavana momba ny téléphones izy ireo.
Raha aorian'ireny fanodikodinana ireny dia misy olana amin'ny famenoana torrents vaovao, ary avereno ny rakitra resume.dat toerana. Raha ny marina dia tsy mitranga izany ary ny programa dia mamorona vaovao iray vaovao aorian'ilay fahavitana manaraka.
Ankoatra izany, mety misy toro-hevitra vitsy amin'ny fanavaozana ny programa, ny fanavaozana amin'ny dikan-teny vaovao na ny fifantenana amin'ny mpanjifa hafa iray hafa, ka aleo aty izany.
Ny olana lehibe tamin'ny fanombohana ny uTorrent dia noravanay androany.
https://termotools.com mg.termotools.com © UTorrent 2019